လင် နှင့် မယား နောက်ဆက်တွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လင် နှင့် မယား နောက်ဆက်တွဲ
လင် နှင့် မယား နောက်ဆက်တွဲ
Posted by thihayarzar on Jul 7, 2012 in Creative Writing |6comments
ဒုတိယ လင်မယားအကြောင်းလေးဆက်လိုက်ကြရအောင် ဒီတစ်ခါ ကောင်လေးကော ကောင်မလေးကော ရွာသူရွာသားများဖြစ်ကြပါတယ် .. ကောင်လေးက ကျောက်ဆည်က ကောင်မလေးက မြစ်သားကပါ … ဒီဇာက်လမ်းမှာတော့ ကောင်လေးကတစ်ဖတ်သတ် အချစ်သမားဗျာ .. ကောင်မလေးမှာက ရည်စားရှိတယ် စစ်ဗိုလ် ပြင်ဦးလွင်မှာ ကျောင်းဆင်းပြီး ရန်ကုန်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာ …. ကျောင်းမှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေလို ခင်ကြရင် ကောင်လေးက စည်းကျော်တယ် .. စည်းကျော်တဲ့သူရှိလား .. ရှိတယ် အဲလိုပဲ ကောင်မလေးက ရည်းစားရှိတာကို သူက မရမက ချစ်နေတော့တာပဲ ကောင်မလေး ဘယ်သွားချင်လဲ ဘာစားချင်လဲ ဘာလုပ်ချင်လဲ အကုန်ကို ဖြည့်စည်းပေးတယ် .. ကောင်လေးက အရင်က ဆိုးတယ် ၁ဝ လောက်ကတည်းက ညတိုင်း အရက်ဆိုင် ရောက်တယ် .. ဒီကောင်မလေးနဲ့ တွေ့မှ ကောင်မလေးက မလုပ်နဲ့ဆို ဟုတ် မသွားနဲ့ဆို ဟုတ် စက်ရုပ်ကလေးလိုပဲ ….. ကောင်လေးက အသားမည်းတယ် ရုပ်ကလည်း မလှဘူးဆိုပေမယ့် ဆိုးလည်း မဆိုးဘူးဗျာ ကောင်မလေးက အသားဖြူတယ် သိပ်တော့ မလှပါဘူး .. ကောင်းလေးက သဘောကောင်း တယ် အလိုလိုက်တယ် အရာရာမှာ အနစ်နာခံတယ် ဒါကိုတောင် ကောင်မလေးက ပြန်မကြိုက်ဘူး ဒီလိုနဲ့ ရက်မှလပြောင်း လမှ နှစ်တွေပြောင်းလို့ ကျောင်း နောက်ဆုံးနှစ် တောင်ရောက်ခဲ့ပီ ကျောင်းပီးရင် ကောင်မလေးနဲ့ သူရည်းစားစစ်ဗိုလ်က လက်ထပ်တော့မှာ ……….. တစ်နေ့ ကောင်မလေးက သူရည်းစားဆီကို အလည်သွားဖို့ အတွက် စီစဉ်နေတာကို ကောင်လေးက သိသွားတယ် .. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်တယ် ကောင်မလေးကို ကားနဲ့တင်ပြေးဖို့ သူဆိုင်ကယ်ကိုလည်း အပြတ်ရောင်းပစ်လိုက်တယ် …. ကောင်မလေးကိုလည်း မလိမ့်တပတ်နဲ့ ညာခေါ် ကားပေါ်တင်ပြီး ကျောက်ပန်းတောင်းက သူငယ်ချင်းရွာကို ကားတင်ပြေးတယ် ………………. ကားနဲ့တင်မပြေးခင် ကောင်မလေးကိုဆွဲကြိုးကို သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတစ်ယောက်က မင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့ခဏဌားပါဆိုပြီး ဆွဲကြိုးကို ဌားထားလိုက်တယ် …..
ကောင်မလေးကိုတော့ ဒီနားလေးခဏ အကြွေးတောင်းသွားမလို့ ဆိုပီး ခေါ်သွားတယ် … တော်တော် တောင် ခရီးပေါက်နေပီ ကောင်မလေးကမသိသေးဘူး … နောက်တော့မှ ကောင်လေးက ဖွင့်ပြော လိုက်တယ် ဖွင့်လည်း ပြောလိုက်ကော ကားကို အသားကုန်ထုပီးတော့ ရပ်ခိုင်းတယ် ပြန်ပို့ခိုင်းတယ် ကားကလည်း မရပ်ဘူး .. မရပ်တော့ ခုန်ချမယ်လုပ်တာ ဆွဲထားရတယ် .. နောက်ဆုံးကားကို လမ်းဘေးချရပ်ပြီး ကောင်မလေးနဲ့ထိုင်ပြီး ဆွေးနွေးကြတယ် .. ကောင်မလေးကို ကားတင်ပြေးတယ် မင်္ဂလာဆောင်သွားမလို့ဆိုပြီး ဆွဲကြိုးဌားပြီး ဆွဲကြိုးနဲ့စာကို နင့်အိမ်ကို ပို့လိုက်ပြီ အခုလောက်ဆို အားလုံးသိကုန်ကြပီလို ပြောတော့ ကောင်မလေးကလည်း ရတယ် ပြန်ပို့ မမှောင်ခင်ပြန်ပို့ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ အိမ်ကို ဇွတ်အတင်းပြန်ပို့ခိုင်းတယ် ချော့ပြောလို့လည်း မရဘူး လမ်းမှာ တွေ့တဲ့ကား အကုန်အော်တော့တာ နောက်ဆုံးတော့ လက်လျှော့လိုက်တယ် ပြန်ပို့ဖို့ အစီအစဉ်ပြန်ဆွဲတယ် .. ဒါပေမယ့် အကြံပါတယ် ကားကို ဖြေးဖြေးမောင်းတယ် ကောင်မလေး မိဘတွေကလည်းသိ ညကလည်း မှောင်တော့မှာဆိုတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရပြီပေါ့ ဆိုပြီး တပ်ဆုက်လာကြတယ် … မိုးကလည်း ချုပ်လာပြီ ကောင်မလေးကလည်း တစ်ယောက်တည်းမပြန်ရဲတော့ ကျောက်ဆည်ကနေ သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ခေါ်ပြီး ပြန်ပို့ရတယ် . ည ၉းဝဝ နာရီထိုးမှ သူအိမ်ပြန်ရောက်တယ် … ကောင်မလေးအမတွေနဲ့တွေ့တယ် … ဘာမှမဖြစ်သလိုနဲ့ ထားခဲ့လိုက်တယ် … မနက်မိုးလင်းတော့ ကောင်မလေး အမေတွေ အဖေတွေက တရားစွဲ အမှုဖွင့်ကော ကောင်လေးရယ် ကြံရာပါသူငယ်ချင်း သုံးယောက် ဆွဲကြိုးဌားတဲ့ ကောင်မလေးကောဆို ပေါင်း ငါးယောက်ပေါ့ဗျာ ….. သွားပြီပေါ့ ထောင်တော့ကျပြီဆိုပြီး ဘီယာ အကွဲသောက်တာ ထကို မထနိုင်ဘူ းဆိုင်ကယ်ရောင်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေလည်း နောက်နေ့ထောင်ကျတော့မယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်ပျော်ပြီးတော့ သုံးပစ်လိုက်တယ်. .. နောက်နေ့တော့ သိန်းငါးဆယ် လူကြီးဆုံရာနဲ့လာတောင်းလှည့်ပါတဲ့ .. ကောင်မလေးက ကြားထဲက ခံရမယ့် ကျွန်တော်တို့ကို သနားလို့ တရားမစွဲတော့ဘူးတဲ့ …. ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပျော်သွားတယ် .. ကောင်လေးတွေ ဘက်ကလည်း သိန်းငါးဆယ် ဘယ်လိုလုပ်ချက်ချင်းရှာနိုင်မလဲတဲ့ ထောင်ကျလည်း မတက်နိုင်ဘူးတဲ့ … ဇာက်လမ်းကတော့ ကောင်းနေပြီ … ကြားထဲနေဝင်ပြီးတော့ ညှိကြတယ် ညှိကြရင်းနဲ့ စကားတွေပါ များလာကြတယ် ပါလာတဲ့ လူကြီးတွေက ဝင်ထိန်းရင်း ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန် စေ့စပ်မယ် စေ့စပ်ပွဲကြမှ မင်္ဂလာဆောင်မယ့်ရက်ကို ရွေးမယ် ဘယ်လိုတင်ရမယ် ဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာအောင် ထားရမယ်ဆိုတာကစဆွေးနွေးကြတယ် .. နောက်တော့ စေ့စပ်တယ် မင်္ဂလာဆောင်တယ် ကောင်မလေးက ကောင်လေးအိမ်ကို လိုက်နေတယ် ညားခါစက စိတ်ဆိုးလို့ မနေနို်င်လို့ဆိုပြီး ရွာကိုပြန်ပြန်သွားတာ ကောင်လေးကလည်း ကောင်မလေးကို စိတ်ဆင်းရဲမခံဘူး စိတ်ကျေနပ်အောင်ထားတယ် ပျော်အောင်ထားတယ် နောက်တော့ ကောင်မလေးလည်း ပျော်သွားတယ် ထင်ပါတယ် .. အခုတော့ လင်မယား နှစ်ယောက် ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး အတူတူ နေနေကြပြီ …. ဇာတ်လမ်းရှည်သွားမှာစိုးလို့ ချုံပစ်လိုက်တယ် … အခုထိ အေးအေးဆေးဆေးပဲ …. ဒါကဒုတိယ လင်မယားဇာတ်လမ်းလေးပါ …. ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေထဲက လင်မယား အတွဲလေးတွေ ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေပါ … အခြား ပြင်ပ အိမ်နီးချင်း လင်မယား ဇာတ်လမ်းတွေလည်းရှိသေးတယ် …. သံသရာတစ်ကွေ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဘဝကြင်ဖော် များ အရာရာအားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေ … တတိယ အတွဲရှိသေးတယ်နော် …
ကိုခြင်္သေ့မင်းရဲ့ တနေ့တစ်မျိုးမရိုးနိုင်မဲ့ လင်မယာများအကြောင်းစီးရီးကိုစောင့်ဖတ်နေပါတယ်။
ဖတ်ရတာ ရင်ခုန်သံအတက်အကျ ဖြစ်မိတယ်ဗျာ ။
တတိယ အတွဲဆီသို ့…. မျှော်။
လင်နှင့် မယား တတိယအတွဲ ကို စောင့်နေမယ်နော်။
ကိုသီဟဇာရာရေ… ဒီရွာထဲမှာ ဖတ်ခဲ့သမျှ ပိုစ့်တွေထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး… အပေါ့ပါးဆုံး.. ဒါတောင် စာရေးဆရာကြီးတွေလို.. စကားလုံးလှလှတွေ မပါပဲ .. ကိုယ်စာစီတတ်သလိုစီပြီးရေးလိုက်တာတောင်…အင်မတန်မှ ကြည်နူးရပါတယ်…။ ဖတ်ရတာလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးရယ်… ဆြာ့ဆာကြီးတွေ ရေးတဲ့ ပိုစ့်အရှည်ကြီးတွေထက် မသာရင်တောင် အောက်မကျဘူး.. ဆက်ရေးဗျာ.. များများသာရေး… လက်မအကြီးကြီးထောင်ရင်း စောင့်မျှော်နေမည့်.. လူဟား…။
ကိုခြင်္သေ့မင်းကြီးရဲ့ လင်နဲ့မယားစီးရီးကို အားပေးနေပါဃျောင်း။
ယနေ ့အတွဲ ပိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပေစွ။